“စွယ်မယ် ကျိန်သစ္စာ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » “စွယ်မယ် ကျိန်သစ္စာ”
1 ကောင်းကင်ပြာ ရေပြင် အရိပ်ထင်တဲ့ စွယ်တော် အဝေးမှာကတိမ်ငွေတောင်ထု
2 သစ်ရွက်များကြားက ပူဇော်ခွင်ကြုံတဲ့စွယ်တော်
3 ဒီအပင်လေးထောင်နေပုံက ကိုချောရိုက်ဘူးတာနဲ့တူတယ်
4 ညမှာဖူးမြင်ရတဲ့စွယ်တော် စေတီတော်
5 မယ်လမုစေတီတော် ရွှေပြောင်ပြောင်
6 မယ်လမုဘုရားတောင် ဘက် က ဆင်းတုတော်
7 ဆင်းစီးလို့ မြင်းရံ အတိတ်တွေခြံရံတဲ့ဘုရားလေးပါ
8 တစ်ဖက်ကမ်းမှာလှမ်းမြင်ရတဲ့ ဘုရားဝဋ်ကြွေးတော်ပြေလို့ပြောတယ် နေပူလို့မရောက်ခဲ့ရ နောက်တစ်ခေါက်အတွက် စဉ်ထားတယ်
9 ကျိန်သစ္စာ ထူးခြားစွာတည်ထားပါတဲ့စေတီတော်
11 အမြင့်တူသောနေရာက တက်ရိုက်ထားတာပါ
12 ကြီးမားခန့်ထည်သော ဆင်းတုတော်ကြီး
“စွယ်မယ်သစ္စာ” (အပိုင်းတစ်) (4-1-2012)နေ့ မနက်မှာရန်ကုန်ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ညနေ မှာဘဲမင်္ဂလာဆောင်ဝင်ရပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်က အပြန်မှာ တော့ ကိုချောက လာစောင့်လို့ ကြိုပေးပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်တာပေါ့ ကျနော်က ဘယ်မှမသွားတတ်မလာတတ်။ ယုဇနဂါးဒင်း မင်္ဂလာခန်းမကနေ စိန်ပေါက်ပေါက်ဆီရောက်သွားပါတယ်။ ကိုချောက ဘယ်သွားချင်လဲမေးတော့ ပထမတစ်ခေါက်ရောက်တုန်းက ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့စွယ်တော် နောက်က ရေကန်ကို လို့ ပြောတာနဲ့သုံးယောက်သားချီတက်ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျနော်လိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေ စိတ်တိုင်းကျရိုက်။ ပြီးတာနဲ့ကိုချောက က” ဟိုင်နန် “အမည်ရတဲ့ တရုပ်စားသောက်ဆိုင်လေးကို သွား။ စိတ်တိုင်းကျစား စိတ်တိုင်းကျလေပေါပြီး ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အပြန်မှာ စွယ်တော်ဘုရား ညမြင်ကွင်းကို စွယ်တော်ပင်လေးအောက်ကနေရိုက်ခဲ့တာပေါ့။ အပိုင်း(2) ဟိုတစ်ခါတုံးက ရွာထဲမှာ ချာတူးလန်က ဘုရားဆင်းတုအကြီးကြီးပုံကိုတင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ အဲဒီဘုရားကြီးကို အတော်လေးစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နားမှန်းမသိတော့ မရောက်ပါဘူး။ ဖြစ်ချင်တော့ ရန်ကုန်က ပြန်တဲ့နေ့ အောင်မင်္ဂလာကားဝင်းကို သွားတဲ့အချိန်မှာ ကြီးမားတဲ့စေတီကြီးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ အဲတော့ မှကိုယ်တည်းခဲ့တဲ့အိမ်နဲ့သိပ်မဝေးမှန်းသိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ရောက်အောင်သွားမယ်ဆို ပြီးစိတ်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ (7-1-2012)နေ့မနက်မှာ မဒမ်ပေါက်ရယ်သူတူမလေးတွေရယ်ကို ခေါ်ပြီး မယ်လမုဘုရားသွားပါတယ်။ ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ 29နှစ်လောက်က တစ်ခါရောက်ဘူးပါတယ်။ အဆောက်အဦးတွေလဲတိုး မြင်ကွင်းတွေလဲပြောင်းသွားပါတယ်။ ဟိုတောင်ဘက်ခြမ်းကိုသွားကြည့်မိတော့ မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာ ဘုရားတစ်ဆူ။ ဝဋ်ကြွေးတော်ပြေ လို့သိရပါတယ်။ မနက်ဆယ်နာရီကျော်ကျော်ပေမယ့် နေပူပြင်းပါတယ်။ မြစ်ကိုလှေနဲ့ ကူးမှ အဲဒီဘုရားကိုရောက်မယ်ပြောတာနဲ့ဘဲ နောက်လာရင်သွားမယ့်စာရင်းထဲတို့ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ဘဲ မယ်လမုကို ဖူးပြီးတော့ မဒမ်ပေါက်တို့ကို ပြန်လွှတ်ပြီး ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ ဆင်းတုတော်ကြီးဆီထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အပိုင်း(3) မယ်လမုကနေဘတ်စကားစီးပြီး အဲဒီဘုရားကို သွားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆင်းရမယ့်မှတ်တိုင်မရောက်ခင် မှာမှားပြီးဆင်းလိုက်မိပါတယ်။ ဘုရားဆင်းတုကြီးကို မြင်လို်က်တော့ တော်တော်ဝေးမှန်းသိလိုက်ရပါတယ်။ ကားထွက်သွားပြီးမှ ဘုရားရောက်ဘို့ အဝေးကြီးလိုမှန်းသိပါတယ်။ ဆိုက်ကားသမားကိုမေးတော့ မှတ်တိုင်သုံးတိုင်စာလောက်ဝေးတယ်ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ဘဲမထူးဘူးဆိုလမ်းဆက်လျှောက်တာ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်လျှောက်မှ ဘုရားဘက်ကို ဝင်သွားတဲ့လမ်းကလေးကို ရောက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ဘုရား ကြီးကို ကြည့်ရင်း သွားလိုက်တာ အနားရောက်မှ ထင်ထားတာထက်ပိုကြီးတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။ ဘုရားပါတ်ပါတ်လည်မှာတော့ ပြုပြင်နေသလို အဝင်တံတိုင်းမှာ မုဒ်ဦးတွေပြင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဘုရားနားရောက်တော့ နေအတော်လေးပူပါတယ်။ နားခိုစရာသစ်ပင်ရိပ်လဲမရှိ။ ဒါပေမယ့် ပုံတွေကို ဒေါင့်ပေါင်းစုံကနေရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ရိုက်နေတုံး ဘုရားအရှေ့ဘက်မှာ ပြုပြင်နေတဲ့လုပ်သားတွေက အပေါ်တက်ရိုက် ရင်ရတယ်ပြောတာနဲ့ အပေါ်တက်ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တက်ရိုက်နေတုန်းအဲဒီ လူတွေက အောက်ဆင်းသွားတာ သတိမထားမိလိုက်ဘူး။ စိတ်တိုင်းကျအောင်ရိုက်ပြီးလို့ဆင်းမယ်လဲလုပ်ရော တစ်ယောက်မှမရှိတော့ပါဘူး။ အမြင့်ကလဲ တော်တော်လေးမြင့်။ အောက်ဆင်းရမယ့်လှေကားကလဲသေးသေးလေး။ အပေါ်ရောက်မှတော့ ပြန်ဆင်းလို့ မရတာသေချာနေတော့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ဆင်းရင်း အောက်ရောက်လာတာကတော့ အမှတ်တစ်ရ။ ကဲ ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါအုံးနော်။ ကိုပေါက်ရဲ့စနက်ရှော့မဟုတ်တဲ့လက်ဆော့ (20-1-12)
ဒီပုံတွေက တော့ ထူးထူးခြားခြား ပုံလေးတွေပါ။
လေးပေါက်လက်ရာတွေက အလန်းတွေချည်းပဲနော် … ။
ရန်ကုန်မှာသာနေတာ …လေးပေါက်ရိုက်လာတဲ့ ဘုရားကြီးကို တစ်ခါမှ သွားမဖူးသေးဘူး … ။ မယ်လမုကနေတောင် ဟိုဘက်ကမ်း မကူးဖူးဘူး … မယ်မလုလည်း မရောက်တာ … ရှစ်နှစ်ကိုးနှစ်ရှိပြီ … နီးနီးလေးနဲ့ ဝေးနေတဲ့ နေရာတွေပေါ့ …. ။
လေးပေါက်ရေ ဒီဘုရားကို ကားပေါ်ကနေပဲဖူးဖြစ်နေတာကြာပြီ
လေးပေါက် ရိုက်ပြမှပဲ အနီးးကပ် ဖူးခွင့်ရတော့
အပြင်မှာတော့ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးဘူး ………
ကျိမ်သစ္စာ ဆိုတဲ့ ဘုရား ဆင်းတု ပုံစံက ဘာလို့ တခြား ဆင်းတုတွေ နဲ့ မတူတာလဲ မသိဘူးနော်။
မန်းသားကြီး ထီးမဆောင်သွားဘူးလား.. နေပူတော့ ထီးကလေးပါမှ တော်ကာကျမှာ လေးပေါက်ရဲ့..
တခါမှမရောက်ဖူးလို့။ ဖူးလိုက်ရတာကျေးဇူးပါကိုပေါက်ရေ။ ကိုပေါက်ကျေးဇူးကတော့ကြီးပါတယ်။
မန်းလေးသားကြီး ရိုက်ပြမှ ဖူးရတယ် ဟ
မတူတဲ့ အမြင်နဲ့ပြောမယ် … ဤသည်ကား သူကြီး အလိုကျ …
နံပါတ် (၄)ပုံမှာ စွယ်တော်ရွက်ကို ကြည့်ပြီး ဆွေးရသလို … စွယ်တော်မြတ်ကိုလည်း ဖူးတွေ့ရတော့ စိတ်ကြည်နှုးမှုပါ ဖြစ်စေတဲ့ ရသကို ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဗျ ….
ကိုပေါက်ရေ shot တွေကတော့ဘာမှပြောစရာမလိုအောင်ကို မိုက်တယ်။
ဂေဇက်မှ ဘုရားဒါယိကာ ကြီး ဦးပေါက်
ဆော်ကြည် ထီပေါက် နိဗ္ဗာန်ရောက်
ဆော်ကြည်ထီပေါက် ရင် အန်တီပေါက်က ခေါက်မပေါ့
တော်တော် အထူပါး နားမလည်တဲ့ ပြောင်ဂျီး
ဟဲ့ ငစိန်ပေါက် ရဲ ့
အန်တီပေါက် က ကိုရီးယား သွားနေဒါ ဟဲ့
တို ့ကိုပေါက်ဂျီး က ဟဲ့
စွယ်တော်ရောက်အောင် ပို့ဆောင်သူက ကိုချောနဲ့ပေါက်ဖော်ပါ။
ကျိန်သစ္စာကို သွားအောင် လမ်းပြသူက ချာတူးလန်ပါ။
သူ့ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ရမယ် သူပြောလို့ ကျနော်သိတာ။
ဆူးရေ အိမ်က ထီးပေးမကိုင်ဘူး၊
ဟိုတစ်ခေါက်လာတုန်းက တည်းအိမ်ကငှားတဲ့ ထီးသုံးချောင်းဘယ်ကျန်ခဲ့မှန်းမသိဘူး။
အဲတော့ လေးပေါက်ကို အဲဒီအိမ်က ထီးမငှားတော့ဘူး။
တင်တဲ့ပုံတိုင်း မြင်ရတဲ့ ကွန်နက်ရှင်မျိုး
ကိုကြီးပေါက်ရဲ့ ရိုက်ချက်ကတော့ကမ်းကုန်ပါပဲဗျာ…ရန်ကုန်မှာနေပြီးမရောက်သေးမဖူးရသေးတဲ့ ဘုရားတွေဂေဇက်ရောက်မှပဲ ဖူးရတော့တယ်..ယခုလို..နေပူထဲမှာ အပင်ပန်းခံပြီး ရွာသူားတွေအတွက် သက်စွန့်ဆံဖျား ကြိုးစားရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ကိုပေါက်ကိုအထူးလေးစားမိပါတယ်ဗျာ…
ဒီလိုလုပ်နိုင်တာ ဝါသနာက တွန်းအားပေးလို့နဲ့တူပါတယ် ကိုဇော်မင်းရေ။
ဆင်းတုတော်ကြီးရဲ့ ဘွဲ့အမည်က “ကျိန်သစ္စာ”ပါ။
ရခိုင်ဘက်က ဆရာတော်တစ်ပါးက ဦးစီးပြီးပြုပြင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။
မယ်လမုနဲ့ဆက်စပ်ခြင်းရှိမရှိတော့ ကျနော် မသိပါခင်ဗျာ။